← တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်တခုကို ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း	မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ စာနာနားလည်မှုနှင့် ချစ်ချင်းမေတ္တာ →	မလေးရှားရှိ UNHCR က မြန်မာလူမျိုး အချင်းအချင်းကို သွေးခွဲနေ	Mar 19
“မတရား အပြစ်ပေးခံရ တော့မည်ဆိုပါက လူသားတိုင်းသည် တခြား နိုင်ငံများတွင် ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံနိုင်သည် ” ဟူသော အချက်ကို လည်း ချိုးဖောက်ရာ ကြပါသည်။
Posted on March 19, 2011, in ဆောင်းပါးကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်တခုကို ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း	မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ စာနာနားလည်မှုနှင့် ချစ်ချင်းမေတ္တာ →	Leaveacomment